Zimbaboe: Mbola Te-Ho Filoha Fanimpitony Ny Filoha Mugabe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Aogositra 2013 1:37 GMT
Nanatanteraka fifidianana manan-danja ny Zimbaboeana androany (31/07/2013) hahafantarana izay ho filoha handimby eo, na i Robert Mugabe izay efa naharitra teo amin'ny fitondrana io firenena Afrikana io, na ho ny iray amin'ireo mpifaninana efatra, isan'izany ny mpiraiminisitra Morgan Tsvangirai.
Fifidianana voalohany indrindra natao am-pilaminana hatramin'ny nitsanganan'ny governemanta iaraha-mitantana teo amin'ny antokon'i Mugabe Zanu PF sy ny antokon'i Tsvangirai “The Movement for Democratic Change (Hetsika ho fanovana ny Demokrasia)”. Niforona taorian'ny fifidianana nifanolànana sy feno rà nandriaka tamin'ny 2008 io fiaraha-mitantana io.
Mugabe, 89 taona ary efa teo amin'ny fitondràna nandritra ny 33 taona, dia nanome toky fa hiala ey amin'ny fahefana raha resy eo. Tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny 1980 , izy no hany filohan'io firenena io hatramin'ny nahazoany ny fahaleovantenany tamin'i Angletera.
Ny Filoha Robert Mugabe no mpitondra naharitra ela indrindra tao Afrika. Sary nataon'ny governemanta U.S ho azon'ny rehetra jerena.
Tsy niraharaha ny tsy fankasitrahan'ireo mpiara-miasa aminy sy ny vahoaka Zimbaboeana i Mugabe rehefa nanambara samy irery ny 31 jolay 2013 ho daty hanaovana ny fifidianana. Nandidy an'i Robert Mugabe hanao ny fifidianana mialoha ny 31 Jolay ny Fitsarana avon'ny Lalàm-panorenana araka ny fangatahana izay neken'i Jealousy Mawarire, Talen'ny Ivon-toerana ho an'ny Fifidianana sy ny ny Demokrasia any Atsimon'i Afrika (CEDSA).
Resa-be ao amin'ny Twitter amin'ny alàlan'ny tenifototra #ZimElections, #ZimbabweDecides, #ZimDecides ary #ZimbabweElections ny tatitra momba ny fifidianana any Zimbaboe.
Namafisin'ny mpandraharaha ara-tsosialy Sir Nigel (@SirNige) ny maha-zava-dehibe ny haino aman-jery mahazatra mandritra ny fifidianana :
Handray anjara amin'ny #ZimElections ny haino aman-jery sosialy, saingy ny haino aman-jery mahazatra ihany no ampiasainay hahafantaranay ny vaovao momba ny fifidianana @ChiefKMasimba
— Sir Nigel (@SirNige) 23 Jolay 2013
Izao no nosoratan'i Realist Diva (@Da4RealDiva) any Bulawayo :
Mandeha tsara ny zava-drehetra hatramin'izao. Mangina Bulawayo… nifidy ny olona, avy eo nody. Tsy misy korontana, tsy misy saritaka, milamina #zimelections #zimbabwe
— RealistDiva (@Da4RealDiva) 31 Jolay 2013
Nosoratan'i Bonny K'ochieng (@orengbony) fa ny fifidianana malalaka sy mangarahara no zava-dehibe indrindra :
Amin'ny maha-Afrikana, tiako ny handresen'i Mugabe raha toa ka malalaka sy mangarahara!! saingy tokony kanaiky ny fahareseny izy raha toa ka Tsvangirai no mandresy azy #ZimbabweDecides
— Bonny K'ochieng (@orengbonny) 31 Jolay 2013
Toy izao no tatitra nataon'ny gazety Southern Eye (@SoutherneyeZim) ao an-toerana :
Misy olona maro ihany any Stanley Square, mikisiaka mihisatra ny filaharana
andrasana hifidy eto i @Welshman_Ncube #ZimbabweDecides
— Southern Eye (@SoutherneyeZim) 31 Jolay 2013
Crisis Coalition, fitambaranà vondrom-piaraha-monim-pirenena maherin'ny 350 any Zimbabwe, nangataka ireo mpifidy mba hanilika ny foto-pisainana hoe tsy misy dikany ny fifidianana :
#ZimbabweDecides andriany. Antenaina ho avy marobe ireo mpifidy voasoratra anarana. Ravao ny foto-pisainana hoe tsy misy dikany ny vatonao – tena misy dikany!
Nizara tantaranà mpifidy iray mahatohina i Idriss Ali Nassah (@mynassah) :
Tany Glen View, Harare, nisy lehilahy iray nilaza fa tonga tamin'ny 3 maraina mba ho voalohany hifidy #ZimDecides
— Idriss Ali Nassah (@mynassah) 31 Jolay 2013
Gideon S.F. Moyo (@Giddo90), mpianatra iray, dia nahatsikaritra fa ny olona vonona hhifidy dia efa niomana ny hilahatra na ho toy inona na ho toy inona halavany :
Mihinana ny mofony misy dobera eo am-pilaharana ny olona… Na dia ny hanohanana aza tsy nahasakana azy ireo androany #ZimElections #ZimDecides
— Gideon S. F. Moyo (@Giddo90) 31 Jolay 2013
Na dia izany aza, dia notantarain'i Mike Madoda (@mikemadoda) ity zava-misy manaraka ity tao amin'ny biraom-pifidianana iray any an-drenivohitra, Harare:
hatramin'izao, mbola latsaky ny 100 ny olona tonga nifidy tao amin'ny Mt Pleasant High Sch- angamba ninoan'izy ireo ho marina ilay tsikombakomba #ZimDecides
— Mike Madoda (@mikemadoda) 31 Jolay 2013
African Election (@Africanelection), tetikasa iray mandrisika ny mpanao gazety sy ireo olon-tsotra manana ireo fitaovana vaovao fampitàm-baovao mba handrakofana ireo toeram-pifidianana sy hanaraha-maso, dia matahotra fa ho sorena ireo mpifidy any amin'ny faritra sasany noho ny tsy fahampian'ny biraom-pifidianana :
@ZimRights1 mpanara-maso avy ao an-toerana milaza fa manana mponina 35 ka hatramin'ny 40000 I Chivhu nefa biraom-pifidianana 3 monja ary dia hahasorena ireo mpifidy izany #ZimElections
— African Elections (@Africanelection) 31 Jolay 2013
Nitaraina mikasika ny Firaisan'ny Onjam-peo Zimbaboeana (ZBC) tantanan'ny fanjakana i Hopewell C (@hopewellc) :
Raha toa ka mampiseho fanavaozam-baovao mivantana ireo fahitalavitra rehetra maneran-tany sy ny First TV …. ZBC kosa mandefa fampisehoana sy rindrankira efa tamin'ny lasa #ZimElections ..smh
— Hopewell C (@hopewellc) 31 Jolay 2013
I Zweli on the Cusp (@Zwellibanzy) dia nanazava ny tahotra nahazo ny mpifidy sasany nanosika azy ireo hikasa hampiasa ny peniny manokana :
‘Mitondra ny peniny ireo mpifidy any Borrowdale noho ny honohono fa hoe mampiasa ranomainty mety manjavona ny penina avy amin'ny fanjakna’ Teknisiana ny ZanuPF #ZimElections
— Zweli on the Cusp (@Zwellibanzy) 31 Jolay 2013
Manoro hevitra ireo mpifidy i Joseph Madondo (@jmad263) :
Alohan'ny handehananao mifidy, fantaro izao, miaina latsaky ny 1.14 dolara isan'andro ny Zimbaboeana. Izany no tokony OVANA #ZimElections
Notsikerain'i Jessie Dendere (@jessiedendere), mpanao gazety Zimbaboeana , ny MDCT antokon'i Tsvangirai :
Antoko malemy ny #MDCT, nahoana no handray anjara amin'ny fifidianana tsy ara-dalàna, tsy ara-drariny, tsy malalaka sy tsy mangarahara ‘ #ZimDecides #zimelections
— jessie dendere (@jessiedendere) 31 Jolay 2013
Ho fampahafantarana bebe kokoa, jereo ny Vote Watch 263, ary ny sehatry ny olon-tsotra ao amin'ny Ushahidi momba ny olom-pifidianana.